Erciyes နှင်းလျှောစီးအခကြေးငွေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီအခြိနျ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်း! - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriErciyes နှင်းလျှောစီးအခကြေးငွေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီအခြိနျ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်း!
Erciyes နှင်းလျှောစီးအခကြေးငွေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီအခြိနျ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်း!
05 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TELPHER 0
Erciyes အချိန်တွင် Cableway 40 ရာခိုင်နှုန်းအခကြေးငွေ! .. CHP အမြင့်စည်းကမ်းဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Orhan ဘတ် Yelda, cable ကိုကားတစ်စီးစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်အနီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာ Erciyes မှာ 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Erciyes အဖြစ်တိုးမြှင့်ကြေညာချက်ဘတ် Yelda Orhan, 'ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုလုပ်က' 40 ရာခိုင်နှုန်းအနီးကပ်အချိန် Kayseri Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကဒီအားလပ်ရက်စတင်ဆောင်းတွင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအလေးအနက်ထိုးနှက်ဖြစ်ပါသည်, cable ကိုကားတစ်စီးခဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ '' သူကပြောခဲ့သည်။
Kayseri ကိုလည်းလက်မှတ်ကိုဆင်း မှစ. လေယာဉ်ခရီးစဉ် Orhan, Kayseri-အစ္စတန်ဘူလ်-Kayseri က Round ခရီးစဉ် 800 အပေါ်အပေးအယူအမြင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူမတွေ့ရှိနိုင်ပေနှင့်ဟုသူကဆိုသည်ကဤနှုန်းမှာစျေးအကြီးဆုံးမြို့ခရီးသွားလုပ်ငန်း Kayseri ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုအချိန် 100 ရာခိုင်နှုန်းကြေးအပေါ် Batumi ကျင်းပခဲ့သည် 29 / 01 / 2016 Cableway yüzdexnumxအချိန်အခကြေးငွေတောင်တို့ Anura 100 မီတာအမြင့်နှင့် 250 မီတာအရှည်ဖို့ပင်လယ်ကနေတိုးချဲ့ Batumi Batumi ကျင်းပခဲ့သည်; နှစ်မှစ. 2586 2016% ကသြစတြီးယားကုမ္ပဏီ Doppelmayr ကေဘယ်လ်ကား Batumi လုပ်ခတိုးခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1005Lari Lari ရှေ့တော်၌ထိုအဖိုးအခမှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သို့သော်; Lari 10 ကျောင်းသားများ,310 သားသမီးများ၏နှစ်အောက်ကလေးများ 2, Lari အားဖြင့်olmadı.ayrıနှစ်အောက်တရားစွဲဆိုစျေးနှုန်းထဲမှာမဆိုစသောအပြောင်းအလဲမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ ကုမ္ပဏီ Agro ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး38 မိုးလုံလေလုံကြိုးတပ်ခြင်းဖြင့် operated cable ကိုကားတစ်စီးစနစ်၏အသီးအသီး, တစ်နာရီကို9ခရီးသည်မရရှိနိုင်ပါသည် ...
အချိန် Capital ကိုဖြတ်သန်းအခကြေးငွေများလာ 14 / 06 / 2014 ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများမြို့တော်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့: ကဖြစ်ခဲ့သည်2နှုန်းအပြည့်အဝဘော်ဒါအတွက်အသစ်သောအခွန်အတ္တဘတ်စ်ကားသည်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားတူရကီ, နှင့်မီထရို Ankaray, 1,50 စီးနှုန်းလျှော့စျေး။ မနေ့ကသူကတူရကီ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာတွင်ယနေ့အစ္စတန်ဘူလ်လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြေးမြှင့်ထံသို့ လာ. အပြီး (Uko ငါ၏အ) ကအထွေထွေညီလာခံအတွင်းထွက်သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအရသိရသည်အတ္တဘတ်စ်ကား, Ankaray နှင့်မြေအောက်ရထားထဲမှာအပြည့်အဝဘော်ဒါ2Estate, လျှော့စျေးဘော်ဒါ 1,50 ကွိုးစားလွှဲပြောင်းအခကြေးငွေလည်း 0,67 တစ်ပြားဖြစ်ခဲ့သည်။ 33 မပြောင်းလဲက MONTH စျေးနှုန်းအသစ်သောစည်းမျဉ်းများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကနေလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်သိရသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) အထွေထွေညီလာခံမရှိအပြောင်းအလဲများကို 33 လအတွင်းလုပ်စဉ်တွင် ...
TÜDEMSAŞန်ထမ်းများအချိန်အခကြေးငွေများ 31 / 12 / 2012 ယခုနှစ် 2012 အချိန်အခြေခံကြေးအခကြေးငွေများအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဘို့ပေးတော်မူသောခွင့်ပြုချက်အောက်မှာTÜDEMSAŞန်ထမ်းများ။ TÜDEMSAŞအမိန့်အမှတ် 399 ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ II ကို။ ၏သင်တန်းသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများအဘို့ပေးတော်မူသောခွင့်ပြုချက်အောက်မှာအုပ်စိုးသောမင်း, 2011 အတွက်ထုတ်ဝေသောအမြင့်စီမံကိန်းကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်, 2012 နှစ်ပေါင်းကိုရေတွက်အလုပျသမားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခြေခံအခကြေးငွေအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြ။ တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-Sen Sivas နျဌာနခှဲကတည်းက 2005 နှစ်များတွင်ရုန်းကန်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေဤကိစ်စတှငျရလဒ်များ။ ပထမဦးစွာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာ Selim Dursun ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sivas ဌာနခွဲနှင့်အတူသူ့အလုပ်၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးတက်မှုဖြစ်စေလျက်, သို့သော်ထိုသို့အခြေခံလုပ်ခခြားနားခြင်းအဖွင့်အကြားလုံးဝအတွက်ဖျက်သိမ်းလို့မရပါ။ ( ...
ဒါဟာတူရကီပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများဖို့အချိန်ရောက်လာသည် 14 / 06 / 2014 ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတူရကီအချိန်အခကြေးငွေများအတွက်ဆိုက်ရောက်:2နှုန်းအပြည့်အဝဘော်ဒါအတွက်တူရကီအတ္တဘတ်စ်ကားဆုံးဖြတ်သစ်ကိုအကောက်အခွန်အရနှင့်မီထရို Ankaray, စီးနင်းလျှော့စျေးနှုန်း 1,50 ဖြစ်ခဲ့သည်။ မနေ့ကသူကတူရကီ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာတွင်ယနေ့အစ္စတန်ဘူလ်လူထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြေးမြှင့်ထံသို့ လာ. အပြီး (Uko ငါ၏အ) ကအထွေထွေညီလာခံအတွင်းထွက်သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအရသိရသည်အတ္တဘတ်စ်ကား, Ankaray နှင့်မြေအောက်ရထားထဲမှာအပြည့်အဝဘော်ဒါ2Estate, လျှော့စျေးဘော်ဒါ 1,50 ကွိုးစားလွှဲပြောင်းအခကြေးငွေလည်း 0,67 တစ်ပြားဖြစ်ခဲ့သည်။ 33 မပြောင်းလဲက MONTH စျေးနှုန်းအသစ်သောစည်းမျဉ်းများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကနေလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်သိရသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) အထွေထွေညီလာခံမရှိအပြောင်းအလဲများကို 33 လအတွင်းလုပ်စဉ်တွင် ...
Muğladayım Zama ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ဖိုးများမှ 04 / 01 / 2017 ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများဘာ့ဂ်Muğladayım: မကြာသေးမီကာလ၌, ထိုအတွက်သတင်းစာများ "ကားမောင်းသူရဲ့အခန်းတစ်ခန်းနှင့်သမဝါယမ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခတိုးမြှင့်ဝယ်လိုအား" Mugla မြူနီစီပယ်ကကြေညာချက်သတင်း၏ညှနျကွားဆီသို့ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်အချက်များဖို့ဒေသ, လောင်စာဆီ, အာမခံ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သတင်းစာများအတွက်ယာဉ်မောင်းခန်းဖြစ်ကြပြီးသမဝါယမမှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘော်ဒါကြေးတိုးမြှင်များအတွက်ဝယ်လိုအားခွနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအရပျကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသမ္မတအားဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 2015 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနဖြင့်ကြေညာချက်၏အစအဦးမှာဖျောပွစျေး update ကို; အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
Erciyes Inc က
Kayseri Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာ
ALD Automotive တူရကီညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ Timur Qajar Assigned
သတ်သွားပါပြီတဲ့အံ့မခန်းနှင့်အတူ Erciyes Moto ပွဲတော်တွင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကို
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုအချိန် 100 ရာခိုင်နှုန်းကြေးအပေါ် Batumi ကျင်းပခဲ့သည်
အချိန် Capital ကိုဖြတ်သန်းအခကြေးငွေများလာ
Muğladayım Zama ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ဖိုးများမှ
2018 တစ်နှစ်တာမှာ Malatya ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများဖို့အချိန်အဘယ်သူမျှမ
ဒါဟာ Mersin-တာရှုမွို့-Adana မီးရထား Carriage ဖို့အချိန်ရောက်လာသည်